မျက်လုံး - ဝီကီပီးဒီးယား
မုန်တိုင်းမျက်လုံး အတွက် ,မျက်လုံး (မုန်တိုင်း)ကိုကြည့်ပါ။.
မျက်လုံး သည် ခန္ဓာကိုယ် ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပြီး အမြင်အာရုံ ရရန် သုံးသည်။ ၉၇ ရာခိုင်နူန်းသော တိရစ္ဆာန် များတွင် မျက်လုံးရှိကြသည်။
 Image-resolving eyes are present in cnidaria, molluscs, chordates, annelids and arthropods.ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; invalid names, e.g. too many
အခြေခံ အကျဆုံး မျက်လုံးပုံစံသည် ဆဲလ် တစ်ခုတည်း ရှိသော အလင်းအာရုံခံ စနစ်ဖြင့် စတင်သည်။ ထိုပုံစံသည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလင်းရှိမရှိသာ သိနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် သတ္တဝါ အများစုအတွက် ဇီဝအချိန် စနစ်ပါဝင်ပြီး အချိန်ညှိရန် သုံးသည်။ တချို့ ပက်ကျိ များ သည် ပုံရိပ်အလုံးစုံကို မမြင်နိုင်ပေ၊ သို့သော် အလင်းအား ပြင်းမပြင်းကို သိနိုင်၍ ၎င်းတို့အား ပြင်းထန်သော နေရောင်ခြည် ကို ရှောင်ရှား စေနိုင်သည်။
ပိုကောင်းသော မျက်လုံးစနစ်တွင် ထိုလုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်သည်။ မျက်လုံးထဲ ရှိ သီးသန့်ဆဲလ် ဖြစ်သော ဂန်ဂျလီယွန် (ganglion) သည် မြင်ရန်အတွက် သာမက တခြားလုပ်ဆောင်ချက် အတွက်ပါ အလင်းကို အာရုံခံသည်။ ၎င်းတို့သည် ရတ္တီနာ (retina) ထဲ တွင် ရှိပြီး retinohypothalamic tract ခေါ် သီးသန့်လမ်းကြောင်း မှ တဆင့် အလင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် များကို ဦးနှောက်သို့ ပေးပို့သည်။ ထိုအချက်များကို အသုံးပြု၍ သတ္တဝါ များ က နေ့ ည ဟူ၍ ခွဲခြားသည်။ ထိုစနစ်သည် အလင်းကို မမြင်နိုင်သော အမြင်ချို့တဲ့သူ များ(တချို့) တွင်လည်း အလုပ်လုပ်သည်။
မျက်လုံး၏ ပုံသဏ္ဌန် သည် ခွက် ကဲ့သို့ရှိ၍ ထို့အတွက်ကြောင့် သတ္တဝါများကို အလင်းလာရာ အရပ် ကို မှန်းဆ စေနိုင်သည်။
ပြည့်စုံသော မျက်လုံးစနစ်သည် အရောင်အသွေး၊ လှုပ်ရှားမှု နှင့် အဆင်အပြင်တို့ ပါဝင်သော ပြည့်ဝအမြင်စနစ် ကို ထောက်ပံ့သည်။ ထိုမျက်လုံးများသည် လုံးဝန်းသော ပုံသဏ္ဌန် ရှိ၍ ရတ္တီနာ ဟုခေါ်သော အတွင်းပိုင်းတွင် ပုံရိပ်ချိန်ညှိ နိုင်သည်။
နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင် အထူးဆဲလ် ၂ ခု ပါဝင်၍ ၎င်းတို့က အမြင်အာရုံ အသုံးပြုကာ ဦးနှောက်ကို မြင်သမျှပို့လွှတ်သည်။
အချို့တိရစ္ဆာန် များ သည် လူတို့မမြင်နိုင်သော အလင်းရောင်ခြည်များ ကို မြင်ရသည်။ ဥပမာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် သို့မဟုတ် အနီအောက်ရောင်ခြည် ဖြစ်သည်။
မျက်လုံး အရှေ့ပိုင်းရှိ မှန်ဘီလူး သည် ကင်မရာ မှန်ဘီလူး ကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ မျက်လုံး အတွင်းပိုင်း ကြွက်သား ကို ကြုံ့ခြင်း ကြွခြင်း အားဖြင့် မှန်ဘီလူး ကို ခုံးစေ ပြားစေ နှိင်သည်။ လူအိုများတွင် ၎င်းကို ကောင်းစွာ မလုပ်နိုင်တော့ပေ။ လူများစု သည် မွေးစကတည်းက သော်လည်းကောင်း၊ နောက်ပိုင်းသော်လည်းကောင်း အမြင်ချို့တဲ့၍ မျက်မှန် သို့မဟုတ် မျက်ကပ်မှန် ကို လိုအပ်နိုင်သည်။
== Types of eye == မျက်လုံးအမျိုးအစားများ
ယခုအခါတွင် မျက်လုံးအမျိုးအစား ၁၀ မျိုးကိုသာ သိရှိသေးသည်။ ပုံရိပ်ဖမ်းစနစ် အတွက်မူ စနစ်တမျိုးတွင်သာ ရှိသည်။
မျက်လုံးကို အမျိုးအစားခွဲရန် တစ်နည်းမှာ မျက်လုံးအခန်း များ ကို ရေတွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြေခံ မျက်လုံးတွင် မှန်ဘီလူး ရှိနိုင်သော တစ်ခန်းသာ ပါဝင်သည်။ စုပေါင်းမျက်လုံးစနစ် တွင် အခန်းများစွာ နှင့် မှန်ဘီလူး များစွာပါဝင်သည်။
မျက်လုံးများကို ပုံရိပ်လက်ခံစနစ် တည်ဆောက်ပုံအရ အုပ်စုခွဲနိုင်သည်။ ပုံရိပ်လက်ခံစနစ်သည် cillated သို့မဟုတ် rhabdomic ထဲကတစ်ခုခုဖြစ်နေနိုင်သည်။ .ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; invalid names, e.g. too many အချို့သော annelids များက နှစ်မျိုးလုံးလည်းဖြစ်နေနိုင်သည်။ .
=== Simple eyes === ဧကစက္ခုသည် အရိုးရှင်းဆုံးသော မျက်လုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် မျက်လုံး တစ်လုံးသာ ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဧကစက္ခုမျက်လုံးတွင် မျက်လုံးအခန်း သို့မဟုတ် ပုံရိပ်လက်ခံစနစ်တစ်ခုသာပါရှိခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
၁ Pit eyes
၂ Spherical lensed eye
၃ Refractive cornea
၄ Compound eyes
==== Pinhole eye ====အပ်ပေါက်မျက်လုံးစနစ်
Spherical lensed eye[ပြင်ဆင်ရန်]
==== Reflector eyes ==== ရောင်ပြန်မျက်လုံးစနစ်
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - Compound eye
စုပေါင်းမျက်လုံးစနစ် သည် အခြေခံမျက်လုံးစနစ် နှင့် ကွာခြားသည်။ ၎င်းတွင် အလင်းအာရုံခံ အစိတ်အပိုင်း များစွာ ပါဝင်သည်။ အချို့တွင် ရာထောင်ချီ၍ ပါဝင်သည်။ ဖမ်းယူသော ပုံရိပ်ကို ဦးနှောက်သို့ အတူတကွ ပို့ဆောင်သည်။ ၎င်းကို အိုမတီဒီယမ် (ommatidium) ဟုခေါ်သည်။ အိုမတီဒီယမ် များသည် အခုံးမျက်နှာပြင်တွင် တည်ရှိ၍ ၎င်းတို့သည် နေရာ အရပ်ရပ် သို့ စူးစိုက်ကြည့်ရူနေသည်။ ထို့ကြောင့် အခြေခံ မျက်လုံးကဲ့သို့ မဟုတ်ပဲ မြင်ကွင်းအတော်များများကို မြင်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် လျင်မြန်သော လှုပ်ရှားမှု ကိုသာမက ဖြတ်ကနဲ ကဲ့သို့ အလင်းကိုပါ အာရုံခံနိုင်သည်။
↑ Land, M.F. (1992). "The evolution of eyes". Annual Review of Neuroscience 15: 1–29. doi:10.1146/annurev.ne.15.030192.000245.
↑ Frentiu, Francesca D. (2008)၊ "A butterfly eye's view of birds"၊ BioEssays၊ 30: 1151၊ doi:10.1002/bies.20828 Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (အကူအညီ)
↑ Fernald, Russell D. (2006)၊ "Castingagenetic light on the evolution of eyes"၊ Science၊ 313 (5795): 1914–1918၊ doi:10.1126/science.1127889၊ PMID 17008522 Unknown parameter |month= ignored (အကူအညီ)
↑ Völkel R.; Eisner M.; Weible K. J. (June 2003). "Miniaturized imaging systems" (PDF). Microelectronic Engineering 67-68 (1): 461–472. doi:10.1016/S0167-9317(03)00102-3. Archived 1 October 2008 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မျက်လုံး&oldid=719967" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။